မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှု့သူများပြားနေပြီး ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားဦးမယ့် စူးရှထက် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အကြမ်းစား သီချင်း(ရုပ်သံ) - Thadin
[ April 22, 2019 ] ကြိုးပေး ခံရတော့မယ့် ဆဲဆဲမှာ ဂဋ္ဌုန်ဆရာစံ တောင်းခဲ့တဲ့ဆု.. KNOWLEDGE
[ April 22, 2019 ] မနာ မကျင် ပဲ (၅) ရက် အတွင်း လုံး ဝပျောက် တဲ့ ကြွက်နို့ဆေး HEALTHY
[ April 22, 2019 ] သွေးတိုးရောဂါ လုံးဝ ပျောက်ကင်းစေသည့် ပြောင်းဖူးပြုတ်ရည် HEALTHY
[ April 22, 2019 ] အမြန်လမ်း နေပူကြဲကြဲထဲက ရဟန်းအိုတစ်ပါး လက်တားနေတာ တွေ့လို့ ကားရပ်လိုက်တာ. ကြားသိရသမျှ
[ April 22, 2019 ] ထမင်းကြမ်း၊ ထမင်းကြော်စားတတ်သူများအတွက် သတိပြုဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ သတင်းတစ်ပုဒ်…! HEALTHY
HomeCELEBRITYမိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှု့သူများပြားနေပြီး ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားဦးမယ့် စူးရှထက် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အကြမ်းစား သီချင်း(ရုပ်သံ)
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှု့သူများပြားနေပြီး ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားဦးမယ့် စူးရှထက် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အကြမ်းစား သီချင်း(ရုပ်သံ)
February 5, 2019 Admin Kwee CELEBRITY Comments Off on မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှု့သူများပြားနေပြီး ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားဦးမယ့် စူးရှထက် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အကြမ်းစား သီချင်း(ရုပ်သံ)
Sexy ကျကျ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ရင်ခုန်သံတွေမြန်အောင် ဆွဲဆောင်နေတာကတော့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် စူးရှထက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်လာတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေ ကြားထဲကနေ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ယခုလို ပရိသတ်အချစ်တွေနဲ့ အောင်မြင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
သူမကတော့ ခုလက်ရှိမှာ ကြော်ငြာဓာတ်ပုံလေးတွေ အများဆုံး ရိုက်ကူးနေရပြီး ပွဲလေးတွေလည်း တက်ရောက်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း အဘက်ဘက်မှ ကြိုးစားနေပြီး သီချင်း MTV လေးတွေလည်း ရိုက်ကူးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုလာတဲ့ အလှတွေရယ် ပရိသတ်တွေနဲ့ ခုချိန်မှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ…
မကြာသေးခင်ကလည်း သူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သီချင်း MTV လေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် လူမှုကွန်ရက်ကနေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… အဲ့ သီချင်းလေးကလည်း တင်ပြီး မကြာခင်မှာ ကြည့်ရှူသူ များပြားခဲ့တာပါ။ ဒီ MTV လေးမှာတော့ ပေပီရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေက ပရိသတ်တွေကို မျက်လုံးမခတ်စေအောင် ရင်ခုန်မှုတွေ အပြည့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တိုင်းကို အားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ပေပီရဲ့ အမိုက်စား MTV လေးကို ပရိသတ်တွေ ရင်ခုန်သံမြန်စေဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
မိနဈပိုငျးအတှငျး ကွညျ့ရှု့သူမြားပွားနပွေီး ပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားဦးမယျ့ စူးရှထကျသရုပျဆောငျထားတဲ့ အကွမျးစား သီခငျြး(ရုပျသံ)
Sexy ကကြ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ရငျခုနျသံတှမွေနျအောငျ ဆှဲဆောငျနတောကတော့ မျောဒယျသရုပျဆောငျ စူးရှထကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ခုနောကျပိုငျးမှာ အောငျမွငျလာတဲ့ မျောဒယျတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဝဖေနျမှုတှေ ကွားထဲကနေ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ ယခုလို ပရိသတျအခဈြတှနေဲ့ အောငျမွငျလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ…
သူမကတော့ ခုလကျရှိမှာ ကွျောငွာဓာတျပုံလေးတှေ အမြားဆုံး ရိုကျကူးနရေပွီး ပှဲလေးတှလေညျး တကျရောကျနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတှကေိုလညျး အဘကျဘကျမှ ကွိုးစားနပွေီး သီခငျြး MTV လေးတှလေညျး ရိုကျကူးနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပိုလာတဲ့ အလှတှရေယျ ပရိသတျတှနေဲ့ ခုခြိနျမှာ အောငျမွငျမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပါပွီ…
မကွာသေးခငျကလညျး သူပါဝငျ သရုပျဆောငျထားတဲ့ သီခငျြး MTV လေးကိုလညျး ပရိသတျတှအေတှကျ လူမှုကှနျရကျကနေ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ… အဲ့ သီခငျြးလေးကလညျး တငျပွီး မကွာခငျမှာ ကွညျ့ရှူသူ မြားပွားခဲ့တာပါ။ ဒီ MTV လေးမှာတော့ ပပေီရဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကေ ပရိသတျတှကေို မကျြလုံးမခတျစအေောငျ ရငျခုနျမှုတှေ အပွညျ့ပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပုံရိပျတိုငျးကို အားပေးနကွေတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျလညျး ပပေီရဲ့ အမိုကျစား MTV လေးကို ပရိသတျတှေ ရငျခုနျသံမွနျစဖေို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ…
မြို့တော်မီးလင်းရေးအတွက် သူ့ရဲ့စုဗူးဖောက်ပြီး (၃၇) သိန်းခွဲ လာရောက် လှူဒါန်းသွားတဲ့ အသက်(၇) နှစ် အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ အလှူရှင်မောင်ပြည့်ဖြိုးဝင့်…!
လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရ သူများအတွက် ဆေးနည်းကောင်း တစ်လက်…!
This Month : 37412
This Year : 178869
Total Users : 537893
Total views : 2433199